ကလေးဝကျောက်မီးသွေးတွင်းလုပ်ကွက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ကျင်းအတွင်း လေပြတ်သေဆုံး ၊ မြန? - Yangon Media Group
ကလေးဝ၊ မတ် ၁-စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝ မြို့နယ်သစ်ချောက်ကျောက်မီး သွေးဒေသတွင် မတ် ၁ ရက်နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက ထွန်းသွင်ကုမ္ပဏီ၏ ဥမင်လုပ်ကွက်ကျင်းအမှတ် (၁) သို့ ကလေးဝမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့်အတူ ကျင်းထဲဆင်းသည့် မြန်မာအလုပ် သမားခြောက်ဦးကိုလည်း ကလေးဝ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ် ပို့ ဆောင်ခဲ့ရပြီး အဆိုပါကျင်းမှာ လုပ် ကွက်နားထားချိန်တစ်လခန့်ရှိနေ ပြိဖြစ်ကာ စက်နှိုးအောက်ဆီ ဂျင် ပေး၍၀င်ကြရာမှ အနက်ပေ ၃၀၀ ခန့်အရောက်တွင် လေပြတ်၍သတိ လစ်မေ့မြောသွား ရာ ဆေးရုံ သို့အ ရေးပေါ် ပို့ဆောင် ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
“တွင်းက အသစ်ပါ။ လော လောဆယ်လုပ်နေတယ်။ သေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားကပညာရှင်လို့ သိရတယ်။ ပညာရှင်စစ်ဆေး ချက် တော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်အရပ် သုံးသပ် ချက်တော့ လေပြတ်ပြီး သေ တာပါ။ ဆေးရုံကိုပို့တုန်းလမ်း မှာဆုံးသွား တာ ။ ကျောက်မီးသွေး လုပ်ကွက်တွေနဲ့ ကလေးဝမြို့ထဲ က ၁၆ မိုင်ဝေးတယ်”ဟု ကလေး ၀မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူးဝင်းနိုင် ကပြောသည်။
သေဆုံးသူမှာ အသက် (၅၃) နှစ် အရွယ်တရုတ်နိုင်ငံသားလီ ချန်း ယူဖြစ်ပြီး ကျောက်မီးသွေးလုပ် ကွက်များကို လာရောက်လေ့ လာ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကလေးဝမြို့နယ် ရဲခစန်းမှ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင် ဘာ ၁၈ ရက်ကလည်း ကျောက် အုံကျေးရွာရှိ ထူးဟန်သစ်ကျောက် မီးသွေးလုပ်ကွက်တွင် လှိုဏ်ခေါင်း အမိုးမြေသားပြိုကျ၍ တွင်းတူး လုပ်သားအောင်ခိုင်ဝင်းဆိုသူ သေဆုံးကာ ကံကြီးအောင်မှာဒဏ် ရာများဖြင့် ကလေးမြို့ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်ကု သခံခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်ကလည်း ကလေးဝမြို့နယ် သစ်ချောက် ရွာ မြောက်ဘက်ရှိကျောက်မီးသွေး လုပ်ကွက်တစ်ခုတွင် မိုင်းခွဲရာမှ တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင့်မြန် မာလုပ်သားသုံးဦး မိုင်းထိမှန်ဒဏ် ရာများရရှိခဲ့ဖူးကြောင်း ကလေးဝ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ယခု တရုတ်နိုင်ငံ သားသေ ဆုံးမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုးဗုံးပေါက်ကွဲမှု အခင်းဖြစ်ဝန်းကျင်မှ လူ ၃၀ ခန့်ကိုစစ်ဆေးပြီးသော်လည်း အဓိကကျူးလွန်သူ?
ဟားခါးမြို့၏ ရှုခင်းကို အပေါ်စီးမှ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ကျပ်သိန်း ၇ဝဝ အကုန်အကျခံ၍ မျှော်စင် တည်ဆေ
ကုန်တင်ယာဉ်များ၏ အခြေအနေ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကို တွေ့ဆုံခွ?
နာမည် ကျော်ကြားသူတွေနဲ့သာ တွဲတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဆန်ဒါရာပတ်